Iron Oxide loko, Color Brick mpanome loko, vy Oxide Color - Huamei
Ny vy mena azôty andian-dahatsoratra
Iron azôty mavo andian-dahatsoratra
Composite manga andian-dahatsoratra
Iron azôty maitso andian-dahatsoratra
Special Toner rafitra ho an'ny loko lalana
Special Toner rafitra ho an'ny loko asfalta
Special loko ho an'ny tany
Ultrafine sy nampiely vy azôty
Special Toner for loko gorodona kapila tanimanga
Fandokoana loko ho an'ny fitaovam-panorenana
Iron azôty loko amin'ny High hafanana-mahatohitra
Architectural ambonin'ny rano haingon-trano coating
Ny orinasa vokatra dia be mpampiasa ny lokony asfalta lalana, simenitra miloko permeable lalana, Flooring, loko, tany taila, ranomainty, loko, seramika, ny lokony sy ny orinasa taratasy. Misy efa ho 30 karazana azôty vy mena, mavo vy azôty, mitambatra manga, tany maitso, vy mainty azôty, vy azôty Brown, marefo paiso, sy ny sisa.
Ny orinasa dia manana efa ho 30 taona ny tantara ao amin'ny famokarana vy azôty loko sy ny manan-karena traikefa famokarana sy ny fahaiza-manao fikarohana. Ny loko loko lampivato mandany famokarana nandroso ny teknolojia sy ny fitaovana famokarana sy ny Siansa sy ny modely fisehon'ny, ary ny ambaratonga ankapobeny ao amin'ny toerana mpitarika ao amin'ny orinasa ao an-toerana. Izany dia fampisehoana orinasa ao Shina vy azôty orinasa.
Ny orinasa dia manana ekipa mahay sy mandroso ny famokarana sy ny fanodinana ny fitaovana, ny teknolojia sy ny famokarana matotra rehefa tonga lafatra-varotra fanompoana. Ny tondro ara-teknika ny ny vokatra no tonga, ary nihoatra ny fenitra-pirenena, ary nivarotra tsara manerana ny firenena ary nandray tsara ny mpampiasa.
Henan Huamei Chengde mpanome loko Co., Ltd. indrindra mahatonga vy azôty loko, dia be mpampiasa ny lokony asfalta ny lalana, azo tsapain-tànana miloko permeable lalana, Flooring, loko, tany taila, inks, loko, seramika, ny lokony sy ny orinasa taratasy. Misy efa ho 30 samy hafa ny mena, mavo, manga, maitso, mainty, volontany, volomparasy, voasary, volondavenona, marefo paiso, sy ny sisa. Nanomboka ny fananganana, ny orinasa dia nanorina tanteraka santionana nandinika sy ny santionany, santionany fihazonana fomba fiasa, ny fanaraha-maso mahomby sy ny vokatra santionany fanadihadiana entana ao amin'ny fanaraha-maso mifanaraka tsara amin'ny kalitao iraisam-pirenena ISO9001 sy ISO14001 rafitra fitantanana ny tontolo iainana iraisam-pirenena ny rafitra fitantanana ny fitsipika. Ireo no afaka manome anao miovaova sy avo lenta mpanome loko vokatra.
ferric azôty mavo
(Noho ny fepetra fampiasana ny tena dia beyon ...
ferric azôty mena
vy mainty azôty
Product fampisehoana: Excellent ara-nofo sy ...
Ny atsimoatsinanan'i ny fihaonan-dalana ny Louli Xian sy Zhaoyan Xian in Huojia firenena, Xinxiang, Henan Province
Soso-kevitra - Hot Products - Sitemap - AMP Mobile © Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved.
Hot Sale mpanome loko Paint Powder Iron Oxide Yellow, vy Oxide Red Fa Coating , Iron Oxide mpanome loko Red Black Brown Ary Yellow Color, vy Oxide Red 130 , Red Iron Oxide Black, vy Oxide Red Factory Prices ,